ZBN azota gropy - China Hangzhou Poly Air Separation Fitaovana
ZBN azote gropy
Fitsipiky ny PSA tsindry azota savily adsorption milina fanaovana Hangzhou Poly rivotra fisarahana mpanamboatra fitaovana Co., Ltd. dia mifototra amin'ny fitsipiky ny tsindry savily adsorption, mampiasa avo lenta karbaona molekiolan'ny sivana toy ny adsorbent, eo ambanin'ny nisy fanerena, ny famokarana ny azota avy ny rivotra. Rehefa maina Compressed fanadiovana ny rivotra, dia ny fanerena ny adsorption sy desorption amin'ny vacuum adsorber. Noho ny aerodynamic vokany, ny tahan'ny diffusion oksizenina ao amin'ny karbonina molekiolan'ny-gazety ...
Fitsipiky ny PSA tsindry azota fanaovana savily adsorption milina
Hangzhou Poly rivotra fisarahana mpanamboatra fitaovana Co., Ltd. dia mifototra amin'ny fitsipiky ny tsindry savily adsorption, mampiasa avo lenta karbaona molekiolan'ny sivana toy ny adsorbent, eo ambanin'ny nisy fanerena, ny famokarana ny azota avy amin'ny rivotra. Rehefa maina Compressed fanadiovana ny rivotra, dia ny fanerena ny adsorption sy desorption amin'ny vacuum adsorber. Noho ny aerodynamic vokany, ny tahan'ny diffusion oksizenina ao amin'ny karbonina molekiolan'ny sivana dia lehibe kokoa noho ny azota sy ny oksizenina dia preferentially adsorbed ny karbôna molekiolan'ny sivana, ary azota dia nampanan-karena ao amin'ny entona dingana. Ary avy eo ny fanerena dia nihena ho ara-dalàna ny tsindry, ary ny adsorbent dia nifatotra ny oksizenina sy ny zavatra hafa loto. General toe-javatra ao amin'ny tontolo roa adsorption tilikambo, iray tilikambo azota adsorption fahaiza-manao, ny hafa tilikambo desorption fahaterahana indray, amin'ny alalan'ny plc fandaharana maso ny hifehy entona miditra tsimoramora fanokafana sy ny famaranana, ka ny roa tilikambo tsingerin'ny, mba hahazoana foana famokarana azota faran'izay tsara ny fikasany. Ny rafitra rehetra dia ahitana ny singa manaraka ireto: Compressed rivotra fanadiovana Module, rivotra fitahirizana tanky, oksizenina azota fisarahana fitaovana, azota buffer tanky.
1, Compressed rivotra fanadiovana singa
Ny rivotra compressor hanome Compressed rivotra aloha handeha ho any an-Compressed rivotra fanadiovana singa, Compressed rivotra avy amin'ny sodina sivana mba hanesorana ny ankamaroan 'ny diloilo, ny rano, vovoka, ny Hivaingana kosa fanamainana bebe kokoa koa ny rano, tsara sivana menaka, vovoka, ary nanaraka ny in hiringiriny marina tsara sivana ho an'ny fanadiovana lalina. Araka ny toe-rafitra, ny rivotra fisarahan'ny-manidina rafitra dia natao ho napetraka ny rivotra Compressed menaka fanesorana fitaovana, izay ampiasaina mba hisorohana ny mety hisian'ny fidirana madinika solika ary manome ampy fiarovana ny karbaona molekiolan'ny sivana. Hentitra famolavolana ny rivotra singa fidiovana mba hahazoana antoka ny fanompoana ny fiainana ny karbaona molekiolan'ny sivana. Rehefa avy hoe entina ny singa, ny rivotra madio dia azo ampiasaina ho fitaovana rivotra.
22, rivotra fitehirizana tanky
Ny rivotra tanky dia ny hampihenana ny mikoriana pulsation, buffer; amin 'izany fampihenana ny tsindry fluctuation eo amin'ny rafitra, ka ny rivotra Compressed hampandeha tsara amin'ny alalan'ny fanadiovana ny rivotra Compressed singa, mba ho tanteraka ny rano hanala loto, hampihenana manaraka PSA oksizenina azota fisarahana vondrona entana. Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny hisakana ny fiasan'ireny tilikambo izy mifamadika izy, koa dia manome fotoana fohy haingana hampitombo ny maro Compressed rivotra ny PSA oksizenina azota fisarahana fitaovana, ny adsorption tilikambo tsindry haingana hitsangana ny fanerena ny asa, azo antoka ny fitaovana azo antoka ary ny mafy orina fandidiana.
3, oksizenina, ary azota fisarahana fitaovana
Ny adsorption tilikambo manokana molekiolan'ny karbaona sivana dia A sy B. Rehefa Compressed rivotra madio miditra ny A tilikambo Inlet sy mikoriana amin'ny alalan'ny karbonina molekiolan'ny sivana ny fivoahan'ny farany, O2, H2O CO2 sy ny adsorbed, ary ny azota mandatsa-dranomaso dia nivoaka avy avy any amin'ny faran'ny fivoahan'ny adsorption tilikambo. Rehefa avy mandritra ny fotoana voafetra, karbaona molekiolan'ny sivana adsorption tilikambo A. Amin'izao fotoana izao, mandeha ho azy ny tilikambo fijanonana adsorption, Compressed rivotra mikoriana ho any amin'ny tilikambo B ho an'ny famokarana ny azota oksizenina, ary tilikambo molekiolan'ny A sivana fiterahana indray. Ny fiterahana indray ny molekiolan'ny sivana dia tanteraka ny taranaka haingana ny adsorption tilikambo izy ny atmosfera tsindry mba hanala ny adsorbed O2, sy H2O CO2. Ireo andry roa mifandimby adsorbed sy nateraka indray mba hamita ny fisarahan'ny oksizenina sy azota, ary ny tapaka Output ny azota. Ny dingana etsy ambony dia fehezin'ny programmable lojikan'ny-maso (plc). Rehefa ny fivoahan'ny faran'ny ny fahadiovan'ny azota haben'ny napetraka sarobidy, plc fandaharana, mandeha ho azy hiainana miditra tsimoramora misokatra, mandeha ho azy ny tsy nahay azota mivarina, azo antoka fa tsy nahay azota gazy tsy mikoriana. Ny entona hiainana rehefa mampiasa ny maotera muffler feo dia latsaky ny 75dBA.
4, ny azota buffer tanky
Ny azota buffer tanky no ampiasaina ho an'ny mahay mampifandanja ny tsindry sy ny fahadiovan'ny ny azota tafasaraka amin'ny azota oksizenina rafitra fisarahana foana mba hahazoana antoka ny famatsiana ny azota tranon'omby. Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny hisakana ny fiasan'ireny tilikambo izy mifamadika izy, dia ho tena ampahany amin'ny entona handidy ny adsorption tilikambo, hisakana ny fiasan'ireny tilikambo tanana manampy tosika, fa koa anjara amin'ny fiarovana ny fandriana, hilalao ny tena anjara toerana lehibe ao amin'ny dingan'ny mpanampy fitaovana amin'ny asa dingana.
Fanondroana ara-teknika ny milina fanaovana azota:
Flow: 3-1000Nm / h Fahadiovana: 95% -99,9995%
Ny ando teboka: latsaky ny -40 Deg C: Adjustable tsindry dia latsaky ny 0.6Mpa
Toetra ara-teknika ny azota milina fanaovana
1 antonony anaty votoatiny, ny rivotra fizarana hitovy, mba hampihena ny fiantraikan'ny ny haingam-pandeha-manidina.
2 hanatsarana ny dingana endrika, ny fampiasana ny vokatra tsara indrindra.
3 tsy manam-paharoa molekiolan'ny sivana fepetra fiarovana mba hanitatra ny fiainana ny karbaona molekiolan'ny sivana.
4 manan-tsaina vitsika, tsy nahay azota fitaovana mandatsa-dranomaso mba ho azo antoka ny vokatra tsara.
5 mikoriana tahan'ny tsy voatery azota, mandeha ho azy ny rafitra fanaraha-maso, lavitra rafitra fanaraha-maso.
6 mora ny miasa, tsy miovaova fandidiana, ambony ny automatique, dia afaka hanatratra unmanned fandidiana.
Faritry ny fampiharana ny milina fanaovana azota:
Metal hafanana fitsaboana dingan'ny miaro mandatsa-dranomaso, ny azota mandatsa-dranomaso sy ny isan-karazany ny fiara mifono vy, simika orinasa fantsona entona fanadiovana, fingotra, plastika vokatra orinasa mpamokatra entana, sakafo orinasa setroka oksizenina vaovao-mitandrina ny fonosana, zava-pisotro orinasa ka hasarony entona fanadiovana, fanafody orinasa azota azota nandidy fonosana ary ny fitoeran-javatra oksizenina setroka, singa elektronika sy ny elektronika orinasa famokarana ny Semiconductor dingana sy ny fiarovana mandatsa-dranomaso. Ny fahadiovana, fivezivezena sy ny fanerena dia azo ahitsy mba hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa samihafa.
Previous: VPSA Vacuum Oksizenina gropy
Next: ZBO Oksizenina gropy
Fitoeran-javatra Natural Gas Generator
Mateza Oksizenina Generator
Hospital Oksizenina Generator
Medical Oksizenina Generator
Natural Gas Power Plant Generator
Azota Generator Machine
ny azota Generator azota Gas Plant
Oxygène Gas Generator
Power Plant Generator Natural Gas
Plant Salamo Oksizenina Generator
Portable Oksizenina Generator
Mpamokatra Gas Engine Generator
Small biogaz Generator